Saamaynta sare ee ABS Hard Shell
Iyada oo safka EPS
Gudaha kanaalka hawada
Baaskiil iyo sikate la xaqiijiyay
Loo heli karo kabaha, mootada iyo koofiyadda safarka.
Nooca alaabta Koofiyad E-baaskiil
Lambarka Moodalka Koofiyad E-baaskiil V01
Kordhi fursadaha Gaashaanka transparant saari karo
Nidaamka ku habboon Nylon ST801 / POM
Mararka qaar ma garaaci kartid qiimaha caadiga ah, koofiyada V01 waa koofiyad run ah oo nooca koofiyadda leh oo leh qolof yar oo qaab-dhismeedka ABS-ka ah oo loogu talagalay adkeysi iyo iftiinka EPS safka ka caawiya inuu soo jiito tamarta saameynta, Qalabka buuxa ee suufku wuxuu kuu oggolaanayaa inaad habeyso ku habboon jilicsanaanta laakiin dareemid raaxo leh, sidoo kale. Majiro wax mashquul ah, majiro wax qabad, kaliya toosiya toosinta caymiska aan kuu oggolaan doonin. Qulqulka hawada ayaa loogu talagalay hagaajiye kaas oo kuu oggolaanaya inaad la qabsato taam la jaanqaadi karto daboolka jiilaalka ama beanie khafiifka ah. Wareejinta qotada dheer waxay hawada ka dhex marisaa koofiyadda si ay waxyaalaha u ahaadaan kuwo cusub oo qabow markaad socoto. Marka waxaad ku raaci kartaa meel kasta oo raaxo iyo qaab ah. Waxaa loo sharciyeeyay labadaba baaskiil iyo iskeeti. Markaa haddii aad ku jirto baarkinka, jeexitaanka, boodboodka wasakhda ama aad uun ku soo safraysid dugsiga, waxaa loo sameeyay inuu ku habboonaado qaabkaaga.
Qalabka injineernimada saameynta sare leh ee ABS wuxuu si buuxda u ilaaliyaa, baaritaano badan iyo falanqaynta xogta waxaan ugu dambeyntii ogaaneynaa dhumucda qolofka ugu fiican ee kaliya aan ku dhaafin imtixaanka guriga iyo qeybta saddexaad ee shahaadada laakiin sidoo kale culeyska ugu fudud, waxaan sameynay cilmi baaris Tijaabinta in qolofku ka gudbay soo gelitaanka 1 mitir dherer ah!
Waxaan isku dareynaa saameynta-nuugista xariiqa EPS iyo adeegsiga tikniyoolajiyada qaab-dhismeedka, taas oo yareyneysa culeyska koofiyadda iyadoo la xoojinayo cimri dhererka, waxaan qaabeynay kanaallada gudaha iyo dibedda ee EPS si loo sameeyo dareen qabow oo fudud.
Koofiyaddu ku rakiban tahay gaashaan transparant saameyn-sare leh si loo hubiyo badbaadadaada roobka iyo siigada ah ee aad diirada saari karto fuulitaanka, iyada oo qayb ka ah howlaha safarka, nooca gaashaanka ayaa loo heli karaa socdaal iyo mooto, koofiyad aadan waligaa ka walwalin xayndaabka oo leh gaashaanka oo wuxuu kaa dhigayaa inaad dareento raaxo.
Iyada oo daboolka ballaaran ee koofiyadda, waxaan u adeegsannaa mesh qabow si dhakhso leh-suufka qalalan si aan u hubinno oo kaliya ku habboonaanta raaxada laakiin sidoo kale dareenka qaboojinta, dusha sare iyo kuleylka hore ee la riixay waxay siinayaan qabow aad u fiican oo qumman madaxaaga.
Hore: Koofiyad Baaskiil VM202
Xiga: E Koofiyad mooto V10S
Koofiyad Baaskiil Fiican Oo Fiican
Soo Iibso Koofiyadda Baaskiilka
Koofiyad Baaskiil Isboorti